Madaxweynaha somaliland oo hambalyo udirey Ciidal Axada Awgeed shacabka somaliland. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Madaxweynaha somaliland oo hambalyo udirey Ciidal Axada Awgeed shacabka somaliland.
Madaxweynaha somaliland oo hambalyo udirey Ciidal Axada Awgeed shacabka somaliland.
Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, ayaa shacabka Jamhuuriyadda Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyey munaasibadda Ciidal-Adxaha ee sannadka Hijriyada Islaamka ee 1442-ka oo maalinta berri ah ku beegan, waxaanu u rajaynayaa in sannadkan sannadkiisa ay ku gaadhaan bash-bash barwaaqo, nabad iyo caano.
Previous articleCiidamo, uu horkacayey Jeneraal Saadaq Joon oo la wareegay degaanka Camaara
Next articleMadaxweyne Muuse Biixi oo 279 Maxbuus ufidiyey Cafis.